Homeसमाचार७४ वर्षकी वृद्धाले गरिन् गोरुसँग बिहे, का’रण सुन्दा सबै छक्क !
April 13, 2021 admin समाचार 3233
के तपाईंले कुनै महि’लाले गोरुसँग बिहे गरेको सुन्नुभएको छ ? यस्तो विचित्र सुन्ने कुरै भएन । तर हालै एक ७४ वर्षकी महि’लाले एउटा गोरुसँग बिहे गरेर सबैलाई अचम्ममा पारिन् । उनी अहिले दिनहुँ आफुले बिहे गरेको त्यो गाईको बाच्छोको हेरचा’हमा लागिरहेकी छिन् ।
उसलाई खुवा’उँछिन्, प्रेम गर्छिन् र ओछ्यानमा समेत सँगै सुताउँछिन् । यो घटना कम्बोडियाको हो । खिम ह्यांग नामक ७४ वर्षकी महिला अहिले निकै चर्चामा छिन् । उनको घरमा पनि रमिते’हरुको भिड लाग्छ । उनी र उनको नयाँ बाच्छो लोग्ने हेर्न मा’निसहरु आउने गरेका छन् ।
कोही महिलाले गोरुसँग बिहे गर्नु दुनि’यामा कहीँ नभएको कुरा नै हो । तर खिम ह्यांग भने उक्त बाच्छो आफ्नो साँच्चीकै लोग्ने भएको बताउँछिन् । यसअघि मृ’त्यु भइ’सकेका आफ्ना पति टोल खुतले सो बाच्छोको रुपमा पुनर्जन्म लिएको उनको दाबी छ ।
खिमका अ’नुसार एकदिन उनका मृत पतिको आत्मा उनको नजिक आएर आफु मृतक पति टोल खूत भएको बताए’छ । त्यसपछि तत्कालै उक्त गाइको बाच्छो खिमको नजिक आयो र उनको कपाल चाट्न लाग्यो । साथै उनको गर्ध’नमा पनि चाट्यो ।
खिमका अनु:सार त्यो बाच्छो ठ्याक्कै उस्तै प्रकारले सिँढी उक्लिने गर्छ जसरी उनका पति टोल खूत सिँढी चढ्दथे । तत् पश्चात उनले उक्त बाच्छोसँग बिहे गरेर आफ्नै पतिको रुपमा स्विका’र गरिन् । आफ्नो पति बस्ने कोठामै राख्न थालिन् । खिमले उक्त बाच्छोलाई आफ्नो पति मानेपनि उनका छोराछोरी’हरुले चाहीँ गोरुलाई आ’फ्नो बाउ मान्न तयार छैनन् ।
यो पनि: बाटोमा हिँडि’रहेको बेलासमेत मोबाइल हेरिरहने मानिसहरुले केवल आफूलाई मात्र दुर्घटनाको जोखिममा पार्दैनन्, अरुका लागि पनि खतरा’को कारक बन्छन् । सायद हिँडिरहेको बेला पनि स्मार्टफोनको स्क्रिनमा आँखा गाड्ने मानिसहरुको जोखि’मयुक्त आनिबानीका कारण दिक्क भएर होला जापान’को एउटा सहरले यसविरुद्धको नियम लागू गर्यो ।
अहिले केही मानिस’हरुका लागि स्मोम्बिज शब्द प्रयोग गरिन्छ । स्मार्टफोन र जोम्बीको सम्मिश्रण’बाट यो शब्द बनाइएको हो । वास्तवमा ती मानिसहरु स्मार्टफोनका यस्ता भूतहरु हुन् जो बाहिर हिँडिरहेको बेला समेत आफ्नो स्मार्टफोन’मा डुुब्छन् र बाहिरी वातावरणको बारेमा कुनै पत्तो हुँदैन ।
यस्ता लाप’रबाह मोबाइल अम्मली बटुवाहरुका कारण कहिलेकाहीँ सडक पार गर्ने क्रममा खत’रनाक दुर्घट:नासमेत हुने जोखिम हुन्छ । यहीँ जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जापानको यामातो सहरले सडक तथा पेटीमा हिँडिरहेको बेला बटुवा’हरुलाई मोबाइल चलाउन प्रतिबन्ध लगाउने नयाँ कानुन वनायो ।
राजधानी टो’किया नजिकैको उक्त सहरमा स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताको तीव्र वृद्धिसँगै सडक दुर्घ’टनामा समेत वृद्धि भएका कारण सडकमा मोबाइल फोनको प्रयोग’मा बन्देज लगाउन थालिएको हो । बटुवालाई मोबाइल फोन प्रयोगमा बन्देज लगाउने उक्त सहर जापानकै पहिलो सहर बन्नेछ। नियम उल्लंघन गर्नेलाई स’जाय गर्ने प्रावधान नयाँ नियममा हुनेछ भने मानिसहरुलाई टेक्स्ट मेसेज तथा पोस्टरका माध्यमबाट नयाँ नियमका बारेमा जानकारी गराइने नगर प्रशा’सनले जनाएको छ ।एजेन्सी
ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कतिमा कारोबार हुँदैछ?
February 4, 2021 admin समाचार 4356
तनहुँका राहुल गुरुङ र छोरीलाई छो’डेर हिडेकी उनकी श्रीमती घरवाट ह’राएको एक महिना पछि काठमाडौको होटलमा अर्का एक पुरुषसंग फेला परिन त्यसपछि उनको जीवनले नयाँ मोड लिएको छ । अहिले उनी पछु’तोको आँशु झारेकी छन्
December 16, 2020 admin समाचार 5724
April 8, 2021 admin समाचार 3557